Intsingiselo yePeridot kunye nePropathi | Ukuphilisa amakristali kunye namatye - Iintsingiselo Iintsingiselo
Intsingiselo yePeridot kunye nePropati yokunyanga, iMetaphysical, kunye nezoMoya
I-sagittarius indoda kunye ne-aquarius yomfazi ebhedini
Intsingiselo yePeridot kunye neProphati
Uluhlu lweziqulatho zePeridot Crystal
Iipropati zePeridot Metaphysical
Iipropathi zokuphilisa zePeridot
Iipropati zePeridot zeZimbiwa
Igama lePeridot Etymology
Sibheja ukuba akunakwenzeka ukubona iPeridot kwaye ungancume.
Nokuba ungakanani na ubungakanani, iPeridot ikhupha ubushushu obuninzi, amandla alungileyo anokunyanzela u-Eeyore ukuba aphume kwi-chorus ka-Pharrell Williams ' Uyolo .
Elawulwa ziiSolar Plexus kunye neNtliziyo Chakras, iPeridot idibanisa amandla abo.
Kule nto, iPeridot inika amandla amandla kwintando yethu kwaye, kwangaxeshanye, ifaka amandla esiwadingayo ukuze senze kwiiminqweno ezinzulu zentliziyo yethu.
I-Peridot inamagama amaninzi kwimbali kubandakanya iGem of the Sun, Evening Emerald, Olivine, Topaz kunye neChrysolite. Ngokwempahla iipropathi zayo zahluke kakhulu kunamagama. Ukusuka kuthando ukuya kukhuseleko kunye nokuphilisa oluhlaza oluhle kweli litye likhanya ngombono. Xa ufuna ukucinga kwihlabathi liphela okanye ngakwigalactical, iPeridot liqabane elihle.
Kwimicimbi yentliziyo, uPeridot akalulo uhlobo lweentloni, lokuthatha umhlala-phantsi. Endaweni yokuba, le kristale eyimfihlakalo ikhulisa ubudlelwane kunye nobulumko kunye nokuqonda. Abo bafumana iintlungu zentliziyo banokusebenzisa iPeridot njengethoni ukuqala inkqubo yokuphilisa. Endaweni yokubambelela kokungaqondani kunye nemithwalo engenamsebenzi, lo myalezo welitye lokuphilisa uthi 'tyala imali okanye uhambe', ukujijeka kocingo akuncedi mntu.
Ikristale yokuphilisa yePeridot yafunyanwa kwisiqithi esincinci e-Egypt malunga namawaka amane eminyaka eyadlulayo apho yayinxitywe njengekhubalo elalikhusela abaPristi abaPhezulu nakweyiphi na ingqumbo kaFaro. Baye basebenzisa iikomityi ezenziwe ePeridot ngembeko kaThixokazikazi uIsis, olawula yonke indalo kodwa ngakumbi iNayile eyayingumthombo weefama zase-Yiphutha ezityebileyo zemilambo.
Mhlawumbi kulapho ke yaqala ukunxulunyaniswa nomhlaba (kunye nombala oluhlaza wasentwasahlobo).
Xa bafunyanwa ngabalweli Bomnqamlezo, bazisa obu buncwane bamatye eYurophu. Apha yathandwa kakhulu kangangokuba amakhonkco oBhishophu enziwe ngayo, emele imigangatho yokuziphatha kunye nococeko. AmaRoma ayithwala ukuze ashukumise ukudakumba.
Abantu baseHawaii baziva ukuba iPeridot yakhiwa kwiinyembezi zikaPele. Omnye uya kwenza kakuhle, nangona kunjalo, ukuba angaqokeleli uPeridot kumazwe kaPele njengoko eyinkosikazi yesiphepho.
Kwimvelo yePeridot ikhula njengeheksagoni. KwiGeometri eNgcwele iheksagoni emele ibhalansi, ubuchule kunye nesisombululo. I-hex ibonakala kaninzi kwindalo ukusuka kwiintyatyambo ukuya kwiincindi zobusi. Ke kwakhona, sifumana umoya wePeridot onobuhlobo obuqinileyo kuGaia kunye neepateni zendalo uqobo. Iheksagoni inamacala amathandathu, njengenkwenkwezi kaDavid kunye noPhawu lukaSolomon.
Nokuba yeyiphi na ifom, uPeridot utsala isitshixo somoya sejometri yethamsanqa, ibhalansi yeYin-Yang nazo zonke izivamvo ezinesithandathu emele ingqondo nobulumko bethu. Ngaba kuyamangalisa ukuba abasebenzi bokuKhanya babuyele ePeridot ukuze babonakalise kwaye badwebe uluntu kunye?
Inkolelo enomdla malunga nePeridot isinika enye intsingiselo kunye nesimboli. Kuyatshiwo ukuba iPeridot ikhanya ngaphakathi ebusuku. Ngapha koko, abasebenzi basezimayini bakholelwa koku kangangokuba bahlala besebenza ebumnyameni. Ukukhanya kwangaphakathi kule gem yemvelo kuhambelana nomoya wethu onokuthi uphume ebumnyameni kwaye ukhokele umphefumlo wethu.
ICrystal Energy: Ubuninzi, ukuBonakalisa, ukuXhobisa
Chakras : Intliziyo (Okwesine), IPlexus yelanga (Okwesithathu)
Isiqalelo : Umhlaba
Inani lokungcangcazela : Ukubala 5 , Amanani 6 & Ukubala 7
Iimpawu zeZodiac : Intombazana , Leo , IScorpio , Isagittarius
Ingqondo: Ukuphepha ukungakhathali: Ukucaca; Ukuxhalaba; Imiba yobudlelwane; Ukukhululwa ukuze ufumane
Umzimba: Imiphunga, isisu kunye nezifo zesibindi; Ukulala; Ukuphazamiseka kwentliziyo
Umoya: Ukhuseleko Ukuphiliswa kweAuric; Ukuhlanjululwa; Isixhobo somhlaba; Ukusebenza kwendalo; Chakra yomqala; Ukukhuthaza ukuthembana; Amandla okomoya
Xa uzifumana uhlanjululwa yimihlaba, uPeridot uyavuya ukushukumisa izinto kancinci, kwaye zihlala ngeendlela ezingalindelekanga.
Eli litye elingcwele aliyi kuhlala kwiinjongo zenzondo okanye ingqumbo engeyiyo nokuba. Ukuba iPeridot ibinemantra iya kuba yile: 'kuthetha ukuba abantu bayanya.' Yigqoke okanye uyiphathe rhoqo ukuze abantu abaneeuras ezingalunganga zihambe zicace.
Njengoko isebenza loo ntwana yomlingo ikwanayo ne-ajenda eyimfihlo-ekwenza uzive ungcono ngawe ukuze ungatsaleleki kwimeko zempilo kunye nokuxhomekeka kubambiswano.
Enye intsingiselo engokomfuziselo yokuba ucingisise ngale kristale iphilisayo - inxulunyaniswe nelanga nenyanga, kungoko iPeridot ivala umsantsa phakathi kokwazi kunye nokuqonda okungaphantsi kunye ne-Higher Self kunye neendawo ezingcwele. Kananjalo sisixhobo esihle sokucamngca.
Ubume belitye bunokutshintsha amandla angcwele kancinci, ke yenza uphando oluncinci kwiJometri eNgcwele ukuze ufumane intsingiselo ethe kratya kwizicelo ezifanelekileyo.
Umbala: Zonke izithunzi eziluhlaza ziphantse zamhlophe zabamnyama
Iindawo Zemigodi: Ehlabathini lonke
Inkqubo yeCrystal: I-Orthorhombic
Ukwenziwa kweMichiza: (Mg, Fe) 2SiO4, Magnesium Iron Silicate
inombolo 333 333 imelwe ngamagama njenge
I-Peridot yigugu ekhethekileyo ekubeni iza kuphela ngombala oluhlaza. Oku akubonakali kubonakala kakhulu kwi-etymology.
Enye yezinto ezinokubakho ligama lesiGrike elithi 'faridat' elithetha nje gem (ngamanye amaxesha abantu bamandulo babengekho imbongi kakhulu).
Igama lesiHebhere elithi Pitdah kwiEksodus linokuthi liguqulelwe kwisiGrike njengeTopazion, abaninzi abavakalelwa kukuba yiPeridot. Oku kuthetha ukuba le kristale iphilisayo inokuba yayiyinxalenye yesigcina-sifuba soMbingeleli oMkhulu kunye namanye amatye angama-11 angcwele.
Kude kwaba ziiMfazwe Zomnqamlezo apho igama elithi Pederote lavela kwiLapidary yesiFrentshi, ethi abanye bakholelwe ukuba isenokuba ekugqibeleni yanika uPeridot igama langoku.
intsingiselo yendlela yobomi yenombolo 6